Suuqgeynta Walxaha Caalamiga ah: Sida Loo Xoojiyo Summadaada Dhulal Shisheeye? | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Suuqgeynta Walxaha Caalamiga ah: Sida Loo Xoojiyo Summadaada Dhulal Shisheeye?
Suuqgeynta Walxaha Caalamiga ah: Sida Loo Xoojiyo Summadaada Dhulal Shisheeye?
Maalin kasta, xitaa xaaladaha ugu xun, boqollaal shirkadood oo bilaw ah, shirkado yaryar, iyo mashaariic ay taageerayaan maalgashi la taaban karo ayaa ka soo baxa adduunka oo dhan.
Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay leeyihiin hadaf iyo riyo guud: caalamiyaynta shirkadaha.
Dunida maanta ee caalamiyeysan, ee internetka, warbaahinta bulshada, iyo aaladaha dhijitaalka ah ay isku xiraan dhammaanteen, gelitaanka suuqyada shisheeye waa lama huraan dhab ah iyo hadaf isku xiran oo macquul ah, gaar ahaan marka la isticmaalayo suuqgeynta nuxurka caalamiga ah.
Taasina waa sababta aan u abuurnay boostadan! Halkan, waxaan ku tusi doonaa dulmar ku saabsan hababka ugu fiican ee istaraatijiyad ka kooban oo ku jihaysan suuqyo cusub iyo shuruudaha kala duwan ee ay tahay inaad tixgeliso si aad si guul leh ugu horumariso.
Bal u fiirso mowduucyada aan ka hadli doono:
Waa maxay waxyaabaha gaarka ah ee suuq-geynta nuxurka caalamiga ah?
Suuqgeynta nuxurku waa hab ku salaysan xidhiidhka dhow ee dadweynaha. Mudnaanteeda ugu weyn waa inay abuurto ka-qaybgal iyo hoggaan tayo leh.
Haddii aad rabto in aad u isticmaasho istaraatijiyad ahaan tiirka qorshaha suuq-geynta caalamiga ah, waxaa lagama maarmaan ah in aad fahanto suuqa cusub gaarkiisa iyo dhinacyada muhiimka ah.
Suuqgeynta caalamiga ah, dhaqanku wuxuu daboolayaa dhammaan fikradaha, fikradaha, caadooyinka, iyo caadooyinka qaabeeya dadka gobol ama waddan la siiyay.
Sidaa darteed, haddii qodobkan iyo kala duwanaanshaheeda ku saabsan suuqyada kale aan si buuxda loo fahmin, suurtagal maaha in la dhiso xiriir lala yeesho dadka la beegsanayo, oo uu matalo qofka iibsada.
Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee lagu fahmo laguna qiimeeyo sifooyinka dhaqameed ee suuqa la beegsanayo waa in la shaqaaleysiiyo kartida maxaliga ah.
Tusaale ahaan, si aad si guul leh u gasho seenyada Hisbaaniga, Content Rock waxaa ku jira qulqulka wax soo saarkeeda daraasiin abuurayaal ah kuwaas oo Isbaanishka u haysta luqadooda hooyo.
Xirfadlayaashaas waxaa haga khubaro kale (sidoo kale ku hadla afka hooyo) oo ka socda kooxda Rock ee Mexico - waddanka ay shirkadu dooratay in ay bilawdo caalamiyeynta.
Isla mar ahaantaana, kuwan madax-bannaanida iyo xirfad-yaqaannada ah waxaa taageeraya boqollaal khabiiro suuq-geyneed oo ku sugan Brazil, oo ah waddanka ay shirkaddu leedahay.
Marka laga eego dhinaca dhaqaalaha, awoodda wax iibsiga, qiimaha lacagta, heerarka dakhligu waa qayb ka mid ah xogta ay tahay inaad qiimeyso oo aad gooni u dhigto istaraatijiyad suuqgeyneed oo caalami ah, iyo arrimo kale.
Qaadashada tan tixgalinta waxay muhiim u tahay horumarinta profile shakhsi iibsadaha oo lagu hagaajiyay xaqiiqda, taasoo awood u siinaysa soo saarista iyo faafinta waxyaabaha soo jiidashada leh.
Tusaale ahaan, haddii shirkaddaadu leedahay badeeco kala duwan, dadweynuhu waxa laga yaabaa inay qaarkood ku qiimeeyaan inay qaali ku yihiin waddan waddan kalena la awoodi karo.
Markaa, soo jeedinta qiimaha nuxurka la xidhiidha alaabtan waa inay isbedelaan tan iyo markii la soo saarayo baahida loo qabo helitaankeeda waxay wax ka qaban doontaa diidmada iibsashada ee kala duwan.
Dhaqanka Isticmaalaha ee Internetka
Suuq kastaa wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah marka la eego hab-dhaqanka isticmaale ee caalamka dhijitaalka ah, hadday tahay matoorada raadinta ama warbaahinta bulshada.
Tusaale ahaan, in kasta oo Facebook uu yahay shabakadda bulshada ugu caansan adduunka oo dhan, si fudud uma qaadan kartid inay tahay kan ugu habboon in la wadaago macluumaadkaaga - maadaama laga yaabo inaan loo isticmaalin suuqa bartilmaameedkaaga sida aad u malaynayso.
Tusaale ahaan, wadamada sida Shiinaha iyo Ruushka, kuwaas oo mudnaanta siiya shabakadaha maxalliga ah, Facebook maaha mid caan ah.
Sidoo kale, qaar ka mid ah wadamada Yurub, Twitter ayaa aad looga isticmaalo Facebook, taas oo aan run ahayn Latin America.
Ku saabsan dhaqanka isticmaalaha, sidoo kale waa muhiim in la aqoonsado ereyada ay dadku u isticmaalaan raadinta matoorada waaweyn ee raadinta tan iyo markii ay bixin doonaan aasaaska horumarinta istaraatiijiyad SEO ah oo wanaagsan.
Mawduuca Rock, tusaale ahaan, waxaan u baahanahay inaan soo saarno nuxurka loo hagaajiyay ereyada muhiimka ah ee isticmaalayaasha Colombia ay raadiyaan wax aad uga yar kuwa Meksikaanka iyo ku xigeenka.
Si aad si fiican u fahamto, waxaanu wadaagi doonaa qaar ka mid ah sawirada SEMRush oo muujinaya mugga raadinta ereyada muhiimka ah "xafiiska guriga" iyo "teletrabajo" ee Colombia iyo Mexico.
Erayga "teletrabajo" waxa uu Kolombiya ku leeyahay 9,900 baaritaan bishii:
Mexico, dhanka kale, kaliya 1,900 isticmaale ayaa raadiya ereyga bishii:
Markaan eegno ereyga muhiimka ah "xafiiska guriga", kaas oo matalaya mawduuc iyo fikrad isku mid ah, waxaa jira ku dhawaad ​​​​15,000 baaritaan bishiiba gudaha Mexico:
Kolombiya, si kastaba ha ahaatee, ereyga "xafiiska guriga" waxaa laga raadiyaa Google kaliya 1,600 jeer bishii:
Iyadoo la tixgelinayo tirooyinkan, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in haddii aan rabno inaan soo saarno wax ku saabsan xafiiska guriga ee dhagaystayaasha Mexico, ugu habboon waxay noqon doontaa isticmaalka ereyga muhiimka ah "xafiiska guriga".
Haddii macmiilkayaga ku habboon uu joogo Colombia, ereyga ugu waxtarka badan wuxuu noqon lahaa "teletrabajo".
Bal eeg sida wax-soo-saarka nuxurka istiraatijiyadeed u noqon karaa mid gaar u ah dalal kala duwan?
Tilmaamaha Dejinta Mareegta
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad dejiso goobta iyo goobaha blog si aad u beegsato goob juqraafiyeed gaar ah.
Tani waxay ka caawisaa shabakadaha iyo daabacaaduhu inay gaadhaan muuqaal weyn oo ku jira liisaska natiijada raadinta ee waddanka la beegsanayo.
Muuqaal muhiim ah oo lagu hubinayo in macluumaadka la gaarsiiyo dadka isticmaala suuqa caalamiga ah waa Hreflang tag, kaas oo tilmaamaya noocyada luqadaha kala duwan ee shabakada.
5 khalad oo ay tahay inaad ka fogaato suuqgeynta nuxurka caalamiga ah
Haddii aad meel fog gaartay, waxaad horeyba u ogeyd sida ay u shaqeyso Suuqgeynta Maaddada Caalamiga ah, laakiin weli waxaa jira wax badan oo la baranayo.
Mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee guusha istaraatiijiyadan waa inaad hubiso inaadan samayn khaladaadka soo socda. Sii wad akhri!
1. Turjumaada Shallow And Literal
Sidaad horeba u ogeyd, qiimaynta dhaqanka dadka ayaa fure u ah suuqgeynta nuxurka caalamiga ah, tanna waxaa ka mid ah in la tixgeliyo odhaah sarbeeb ah iyo habka ay u hadlaan.
Samaynta tarjumaada saxda ah ee nuxurku ma dammaanad qaadayso inay noqon doonaan kuwo la fahmi karo oo ay dhalin doonaan xidhiidh waara oo lala yeesho dhagaystayaasha la beegsanayo.
Waa muhiim in la waafajiyo weedhaha, tibaaxaha, iyo qaabka luqadda iyo dhaqanka lagu arkay suuqa cusub, sida ay tilmaamayaan hababka tarjumaada ugu fiican ee Suuqgeynta Dijital ah.
Mabaadi'daani waa in sidoo kale lagu dabaqaa marka alaabada dibadda laga soo saarayo, maadaama tarjumaadaha tooska ah iyo kuwa suugaantu ay keeni karaan magacyo qariib ah oo xitaa fisqi ah.
Ka sokow, adeegsiga ereyada ajnabiga ah ee guud waxay ka hortagi kartaa algorithms search engine in ay u aqoonsadaan macluumaadkaaga mid xiiso leh oo khuseeya isticmaalayaasha ku hadla luqaddaas.
Tani waxay si cad u ahayd tusaalihii hore ee ku saabsanaa xafiiska guriga.
Haddii qoraalka markii hore lagu qoray Ingiriisi, tusaale ahaan, ka dibna loo tarjumay qaabkiisa suugaaneed, ereyga la isticmaalay wuxuu noqonayaa "casa trabajo", taas oo aan matalin sida Mexican-ka ay isu muujiyaan mawduucan.
Turjumaada waa inay noqotaa, dhab ahaan, hannaan laqabsiga nuxurka dhageystayaasha caalamiga ah.
2. Aan soo saarin nuxurka asalka ah
Turjumaada nuxurka ayaa ah mid aad waxtar u leh, gaar ahaan bilowga istaraatijiyad, maadaama ay oggolaadaan qulqulka faafinta heer sare ah, ka faa'iidaysiga agabka loo soo saaray waddankii hooyo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la soo saaro nuxurka asalka ah, oo ku habboon bilawga ilaa daawadayaasha cusub ee bartilmaameedka ah, iyada oo la tixgelinayo baahidooda gaarka ah.
Soo saari la'aanta alaabta asalka ah waxay daciifisaa istaraatiijiyadda, taas oo adkeynaysa in la abuuro ka-qaybgal iyo in la dhiso dhagaystayaal adag.
3. Aragtida ah in dhammaan dhagaystayaashu ay siman yihiin
Marka la barbardhigo dhageystayaashaadii asalka ahaa, dhagaystayaasha cusub ee waddan kale waxay u fakarayaan oo u dhaqmaan si ka duwan intarneedka. Weligaa ha ilaawin tan!
Go'aan kasta oo aad u qaadato istaraatiijiyadaada waa in ay lahaataa fikrad ah in suuqa cusubi uu ka duwan yahay kan waddankaaga hooyo.
Sidaa darteed, isku day inaad aqoonsato:
shabakadaha bulshada ee ugu caansan;
nooca ugu habboon ee nuxurka;
waqtiga ay ku qaadato in la isticmaalo waxyaabaha ku jira internetka;
heerka dhaqanka dhijitaalka ah ee dadweynaha;
iyo dhinacyada kale ee muhiimka ah ee hab-dhaqanka.
4. Ka Boobitaanka Tixraaca Dhaqanka ee Suuqa Caalamiga ah
Ka sokow in aad dhaqanka ku qiimayso aragti sarbeeb ah, waa in aad tixgelisaa nuxurka diiradda iyo tixraacyada aad dul dhigto.
Mar kasta oo aad rabto inaad wax ku sawirto tusaale ahaan, hubi in dhagaystayaasha maxalliga ahi ay fahmaan oo ay ku xidhmaan. Tani waa sababta ay ugu habboon tahay in la barto dadka caanka ah ee khuseeya, taariikhaha qaranka, dhacdooyinka taariikhiga ah, iyo kuwo kale.
5. Falanqaynta Natiijooyinka La'aanta
Haa, falanqaynta natiijadu waxay aasaas u tahay istaraatiijiyad kasta oo Suuqgeynta Dijital ah, laakiin runtu waxay tahay inay u qaadanayso muhiimad gaar ah marka ay timaado suuqgeynta nuxurka caalamiga ah.
Xusuusnow marka aad u faafinayso nuxurka dhagaystayaasha waddan kale, waxaad si joogto ah u baran doontaa isticmaaleyaasha.
Sidaa darteed, waa inaad isticmaashaa cabbirro iyo tilmaamayaal si aad u fahamto aragtiyahooda iyo jawaabahooda, una oggolaato shirkaddaada inay hagaajiso qaabkaaga, fariimahaaga, iyo walxaha kale ee istaraatiijiyadeed.
4 Tiirarka Istaraatiijiyada Suuqgeynta Macluumaadka Caalamiga ah
Si loo xidho hagahan ku saabsan Suuqgeynta Mawduuca Caalamiga ah, waxaanu kuu sharxi doonaa afarta tiir ee suurtagelin doona istaraatiijiyadaada inay guulaysato.
1. SEO caalami ah
Fikradan dhamaystiran, qoto dheer waxay dabooshaa go'aamada istaraatiijiga ah iyo ficilada u oggolaanaya goobta iyo daabacaadadeeda inay gacan ka geystaan ​​mashruuca caalamiga ah ee shirkadaha iyada oo la gaarayo darajooyin lagu qanco ee SERPs.
Waxaa ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee caalamiga ah ee SEO waa isticmaalka ereyada muhiimka ah iyo ereyada caadiga ah ee dhagaystayaasha maxalliga ah, kuwaas oo meelaynta mashiinka raadinta ay si toos ah ugu xiran tahay.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la fahmo ujeedada isticmaalaha ee SERPs, iyadoo la tixgelinayo nooca nuxurka ee khuseeya ereyada muhiimka ah ee gaarka ah.
Tusaale ahaan, marka aad gelayso "nololeedka" mashiinka raadinta, muxuu isticmaalahaagu rabaa inuu ogaado? Wax la xidhiidha cuntooyinka caafimaadka leh? Jimicsi samee? Siyaabaha lagu kasbado lacag?
Kuwani waa fikrado ay tahay inaad ka sameyso erey kasta oo muhiim ah, marka la falanqeeyo, tilmaamaya fursado wanaagsan.
Ugu dambeyntii, ku saabsan SEO-ga caalamiga ah, dhinacyada farsamada ayaa sidoo kale door muhiim ah ka ciyaara, iyo Hreflang tag waa qayb ka mid ah isla'egtan, sida aan ku sheegnay mawduucii hore.
Waa sumad qiimo leh oo loogu talagalay abuurista nuxurka dhageystayaasha maxalliga ah ee suuqaaga bartilmaameedka ah maadaama ay u dirto calaamad matoorada raadinta marka isticmaale uu ku weydiiyo luqad gaar ah.
Tani waxay ka dhigan tahay in haddii aad rabto inaad bartilmaameedsato suuqa Anglo-Saxon, waxaad u baahan tahay inaad u dejiso goobtaada "Ingiriisi" adoo isticmaalaya "en" tag.
Tani waxay kaa dhigi doontaa inaad si aad ah uga muuqato isticmaalayaasha ka socda wadamada Ingiriisiga ku hadla, marka loo eego falanqaynta IP-ga ee matoorada raadinta si toos ah u sameeyaan.
2. Blog Loogu Talagalay Dhagaystayaasha Maxaliga ah
Waxaad hore u ogeyd in dhammaan dhagaystayaashu ay leeyihiin waxyaabo gaar ah iyo kala duwanaansho ah oo ay tahay in la tixgeliyo marka la quudinayo blog-kaaga shirkadda.
Mid ka mid ah xeeladaha ugu muhiimsan ee lagu gaari karo habayntan ayaa ah abuurista iyo faafinta agabka gaarka ah ee waddanka la beegsanayo, kuwaas oo ka hadlaya tirakoobkooda, isbeddelkooda, iyo sheekooyinkooda.
Si kale haddii loo dhigo, kuwani waa agab aad u khuseeya dalka aad ku beegsanayso istiraatiijiyadaada caalamiga ah.
Sidoo kale, isku day in aad ku darto qoraaladaada iyo agabka lagu xusay ama tusaalooyinka ay dhagaystayaasha maxaliga ahi la xidhiidhi karaan, oo ay ku jiraan shakhsiyaadka taariikhiga ah, caanka ah, iyo qaybaha kale ee dhaqameed.
Si taas suurtogal looga dhigo, ku samee shakhsi iibsadahaaga macluumaad ka yimid waddanka la beegsanayo, adigoo u hagaya dhammaan dhaqamada cilmi-baadhista (sahaminta, waraysiyada, iwm.) dadka iyo isticmaalayaasha goobtaas.
3. Cilmi-baarista tartanka caalamiga ah
Qaybta baadhistu waxay sidoo kale fure u tahay istaraatiijiyada suuqgeynta nuxurka caalamiga ah waxayna kaa caawin doontaa inaad samayso go'aamo wanagsan.
Waa inaad diirada saartaa cilmi baaristaada tartanka gudaha dalka aad beegsaneyso. Si tan loo sameeyo, taxliilin:
sida ay u wada xiriiraan;
nooca nuxurka ay dhaliyaan;
Farsamooyinkaas oo bixiya natiijooyin wanaagsan.
Waxa kale oo lagama maarmaan ah inaad ogaato khaladaadka tartamayaashaada suurtagalka ah ay sameeyaan si aanay dib ugu celin.
Habkan lagu falanqeynayo tartankaaga dhijitaalka ah ee suuqyada ajnabiga ah ayaa ah mid aad u xiiso badan sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad soo afjarto helitaanka tartano badan oo cusub, maadaama aysan dhamaantood noqon doonin ganacsiyo caan ah oo caalami ah.
4. Samaynta Isbahaysiga Ciyaartoyda khusaysa Suuqa Bartilmaameedka
Maalmahan, baraha bulshada waa qayb ka mid ah nolol maalmeedka malaayiin qof.
Markaa, marka laga hadlayo isbahaysiga, waxaa lama huraan ah in laga fikiro dadka wax saameeya ee caanka ka ah deegaanka.
Doorashada saamaynta ku habboon waxay noqon kartaa tallaabo muhiim ah oo lagu kasbado kalsoonida dhageystayaasha la beegsanayo iyo inaad naftaada u dhigto beddelka suuqa cusub.
Sidoo kale, isticmaal xeeladaha isbahaysiga ama xidhiidhka dabiiciga ah si aad dib-u-eegis uga abuurto goobaha la aqoonsan yahay iyo kuwa la ixtiraamo ee dalka aad beegsanayso.
Waxa kale oo aad loogu talinayaa in laga shaqeeyo boosaska martida caadiga ah.
Haddii aad na raacday ilaa hadda, waxaad hore u garanaysay dhinacyada muhiimka ah ee suuq-geynta nuxurka caalamiga ah, khaladaadka ay tahay inaad iska ilaaliso, iyo tiirarka istiraatiijiyad wanaagsan.
Xasuusnoow in dhammaan ay ka bilaabmaan daahfurka iyo fahamka qofka iibsadaha caalamiga ah iyo garashada in dhammaan dhegaystayaashu ay dhaqan ahaan ka duwan yihiin oo ay leeyihiin waxyaabo gaar ah.
Iyada oo ku saleysan fikradan, waxaa soo baxaya waxyaabo waxtar leh, dhaqamo, iyo habab, kuwaas oo runtii fursad u haysta inay kula xiriiraan macmiilka suurtagalka ah oo ay gacan ka geystaan ​​meelayntaada suuqa cusub.
Marka laga soo tago dhaqamada wanaagsan ee Suuqgeynta Maaddada, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo in ay lagama maarmaan tahay in la doorto waddanka saxda ah si loo gaaro guusha caalamiga ah ee shirkadaha.
Marka laga hadlayo Mawduuca Dhagaxa, doorashada Mexico oo ah wadnaha hanaankeeda caalamiga ah ma ahayn wax iska dhacay. Taas beddelkeeda, waxay ahayd go'aan istiraatiji ah oo si qoto dheer looga fakaray.
Ma xiisaynaysaa inaad wax badan ka barato Suuqgeynta Mawduuca Caalamiga ah oo aad fahanto sida loo dheelli tiro xeeladaha caalamiga ah iyo kuwa maxaliga ah? Fiiri Kulankayada Jam ee Pam Dinder, suuqgeeye dhijitaalka ah iyo teknoolojiyadda xamaasad leh kaasoo daabacay buugag yar oo mawduuca ku saabsan.
8 Fikradaha TikTok ee Ka-qaybgalka
3 Waa in-Dos si loo muujiyo *Run* Ka mid noqoshada iyo Kala duwanaanta Suuqgeyntaada